Media, karamaina ary ahazoana vola: famaritana, mpihaino ary fiasa | Martech Zone
Miankina amin'ny fantsona voalohany 3 ny fampiroboroboana atiny - haino aman-jery karama, haino aman-jery tompona ary haino aman-jery azo.
Na dia tsy vaovao aza ireo karazana haino aman-jery ireo, dia ny nalaza sy ny fanatonana ireo haino aman-jery tompony no nahazoany fiovana izay mihantsy ny haino aman-jery mahazatra be karama. Pamela Bustard, The Media Octopus
Famaritana haino aman-jery aloa, manana ary ahazoana
Araka ny The Media Octopus, ny famaritana dia:
Paid Media - Izay zavatra andoavam-bola hividianana fifamoivoizana amin'ny fananana haino aman-jery; mandoa vola ianao mba hampitomboana ny fimamoana amin'ny alàlan'ny fantsona.
Haino aman-jery tompony - Ny fantsona fifandraisana na sehatr'asa izay an'ny marikao noforoninao ary voafehinao.
Media nahazo - Rehefa miresaka momba ny olona sy mizara ny marikao sy ny vokatrao ny olona, ​​na ho valin'ny atiny nozarainao na tamin'ny alàlan'ny firesahana an-tsitrapo. Fampahalalana maimaim-poana ateraky ny mpankafy.
Azoko ampiana fa matetika dia mifanindry ny paikady. Matetika izahay dia manomboka ny fampielezana haino aman-jery azo amin'ny alàlan'ny famoahana ampahany betsaka amin'ny alàlan'ny loharano karama. The haino aman-jery karama ny loharanom-baovao dia mampiditra ny atiny, fa ny hafa kosa haino aman-jery tompony loharano maka azy ary hahazoana fanamarihana maro hafa amin'ny alàlan'ny fantsom-piarahamonina.
Tags: haino aman-jery nahazofamaritana haino aman-jery nahazohaino aman-jery tomponyfamaritana haino aman-jeryhaino aman-jery karamafamaritana haino aman-jery karamakarama fananana nahazo
WiFi amin'ny fiara? Ny indostrian'ny fiara tsy mahazo ahy